Imveliso - Ikkaro
yokuqalisa >> U ku velisa
Kwilizwe apho ulungiselelo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo Iyafuneka kakhulu ngenxa yezixhobo ezinqongopheleyo, iindleko kunye neengxaki zokusingqongileyo, ukuvelisa ngelixa ukunciphisa inani lenkunkuma kunokuba kufanelekile. Kulapho iimodeli zeMveliso eziNgcolileyo ziza kudlala khona. Ngale ndlela, imveliso yolu shishino iza kuphuculwa ngelixa kuncitshiswa ilahleko kumxokelelwano wokuvelisa.
Eli lixabiso elongeziweyo kumthengi wokugqibela, kuba unokuzithengisa njengo "brand green" leyo kunciphisa inani lezixhobo ezisetyenzisiweyo Ngexesha lenkqubo ngaphandle kokuchaphazela umgangatho okanye iziphumo zokugqibela.
UMDALA: gd-jpeg v1.0 (usebenzisa IJG JPEG v80), umgangatho = 90
Iinkampani ezininzi zigxila kwimizamo yazo, yokukhuthaza ukuthengisa, ekwenzeni imikhankaso yokuthengisa esebenzayo. Le yinkqubo eneziphumo ezilungileyo, yiyo loo nto iinkampani ezinkulu zityala imali eninzi kolu hlobo lomkhankaso. Okwangoku, ngeDatha eNkulu kunye nedatha eqokelelwa kwisoftware esiyisebenzisayo, imikhankaso esebenzayo inokwenziwa. Kodwa nangona kunjalo, intengiso ayisiyiyo yonke into kwaye Kukho iindlela ezizezinye ezintle ezinjengeMRP.
Nge-MRP unako phucula inzuzo yeshishini ngaphandle kokuthengisa ngaphezulu ubuninzi beemveliso okanye iinkonzo. Oku kunokubonakala ngathi kuyaphikisana, kodwa ayisiyiyo. La maqhinga akwabandakanyi ukunyusa ixabiso lemveliso, enokuba yingozi kakhulu kukhuphiswano. Iindlela ze-MRP zihamba ngendlela eyahlukileyo ...
SGA okanye WMS
Kwimizi-mveliso izisombululo ziyafuneka kwimicimbi nganye engenelelayo kwinkqubo yomsebenzi owenziwa yinkampani. Oko kuhamba kwimveliso ukuya kulungiselelo, kukwahamba nolawulo lwendawo yokugcina izinto. Okwangoku, Isoftware yeSGA (Inkqubo yoLawulo lweWarehouse) ikuvumela ukuba uzenzele kwaye usebenze ngakumbi le misebenzi yokugcina izinto ezingavuthi okanye imveliso yokugqibela.
Ngamaxesha amaninzi, i-WMS iza njengemodyuli ethile okanye umsebenzi ngaphakathi kwe- Isoftware ye-ERP que sihlalutye kwinqaku elidlulileyo. Kodwa, ayingawo onke amashishini afuna i-ERP ebanzi, kwaye akhethe izisombululo ezinobhetyebhetye besebenzisa isoftware ethile yoovimba babo. Nokuba kunganjani na, apha ndiza kuzama ukucacisa onke amaqhosha kunye neempawu zolu hlobo lwesoftware kunye nendlela abanokunceda ngayo inkampani.
Ukuba uyakhumbula ukuba isihloko se- I-JIT (nje-ngeXesha) okanye indlela yeToyota, Ngokuqinisekileyo iya kukhala intsimbi ingcamango yeKhanban. Ngokusisiseko yindlela yolwazi ekwaziyo ukubonelela ngolawulo olukhulu kwiinkqubo zokuvelisa, isenza imveliso yemizi-mveliso iphucuke. Ngokukodwa xa kukho intsebenziswano phakathi kweenkampani ezininzi ezibonelela ngezixhobo okanye izixhobo zemveliso.
Le nkqubo ikwabizwa ngokuba yinkqubo yamakhadi, kuba isekwe ekusetyenzisweni kwamakhadi alula apho ulwazi oluyimfuneko malunga nezinto luboniswa, ngokungathi lingqina lenkqubo yokuvelisa. Nangona kunjalo, nge iinkampani zifakwa kwikhompyutha, kunokwenzeka ukuba kuphuculwe iinkqubo zamakhadi emveli (post-it) ukudibanisa neenkqubo zedijithali.
El lawulo lo mgangatho ibe lelinye inqanaba kushishino. Kwaye ayisiyiyo kuphela imfuno yabenzi yokuhlengahlengisa iimveliso zabo kukhuseleko okanye eminye imigaqo kunye nemigangatho ebekwe phantsi kwemigaqo eyahlukeneyo. Ukwanelisa abasebenzisi abaya benamanani amakhulu okhetho phakathi kokhuphiswano, kwaye baya besazi ngakumbi malunga nomgangatho kunye neempawu zeemveliso kwintengiso.
Ke ngoko, ngumenzi ngokwakhe ekufuneka aqinisekise ukuba iimveliso zakhe ziyahambelana imigangatho esisiseko kunye nomgangatho owaneleyo njengabathengi abonwabileyo (ukunyaniseka). Ukongeza, olu lawulo lomgangatho lusebenzela umzi-mveliso njengempendulo elungileyo yokuphucula imveliso, kunye namaxabiso asezantsi athathwe kukusilela okanye ukubuya.
Ngexesha nje (JIT)
Itoyota yenye yezona zinto zivelisayo ehlabathini kwaye iyinkokeli kwicandelo leemoto. Akukho mathandabuzo. Iifektri zaseJapan ziyabonakala ngokusebenza kwazo kunye neendlela ezisetyenzisiweyo. Kakhulu kangangokuba indlela ebizwa ngokuba "Indlela yeToyota”(Okanye i-TPS yeToyota Production System) eye yamkelwa ngamanye amashishini angaphandle nakwicandelo leemoto. Oko kunika umbono ocacileyo wokuba isebenza njani le ndlela yokusebenza.
Le ndlela ibizwa ngokuba ngendlela eqhelekileyo JIT (Ngexesha nje) okanye ngexesha nje. Kwaye igama layo lichaza kakuhle ukuba liyintoni. Njengoko unokuthelekelela, isekwe kwindlela ukuhanjiswa kwezinto eziyimfuneko kwimveliso ziphathwa ngayo. Ikuvumela ukuba unciphise iindleko, kwaye uhlala unezinto eziyimfuneko onazo ukuze imveliso ingayeki.
Le ndlela iba ngokufanelekileyo ukuba kwezinye iimeko iinxalenye okanye izinto eziyimfuneko kwimveliso ziveliswa kwangolo suku zifakiweyo kwaye sele zidityanisiwe ezimotweni nakwezinye iimveliso ezenziwe. Ngapha koko, isetyenziswa njengovavanyo okanye umlinganiso wokusebenza kakuhle kwicandelo.